I-Rubella yisifo esibangelwa sisifo. Ibonakala ngokukhukhumeza, i-lymph nodes ekhulisiweyo, intlungu edibeneyo. Ukunciphisa, njengokulawula, kuqhubeka malunga neentsuku ezintathu kwaye kunokuhamba kunye nokushisa komzimba ophantsi. Ezinye iimpawu, ezinjengeentloko, isisu, ukulahleka kwesidlo kuninzi kakhulu kubantu abadala kunabantwana. Ngamanye amaxesha isifo sisenzeka ngaphandle kwempawu zonyango. I-Rubella yintsholongwane ehlukileyo ngokupheleleyo kuneyonke imasisi. Ngako oko, i-rubella immunity ayikhuseli kumasisi, kwaye ngokuthe ngqo. Ngokuqhelekileyo, i-rubella iyaphiliswa ngaphandle kokuba amayeza kunye nokukhuseleka okukhuseleke kule ntsho longwane. Kodwa kukho iimeko xa i-rubella ingaba yingozi xa owesifazane ekhulelwe. Yintoni eyingozi kwi-rubella ngexesha lokukhulelwa?
Phantse i-25% yabantwana abasandul 'uomama abaye bafumana i-rubella ngexesha lokuqala lokuqala lokukhulelwa bazalwa ngesiphene esisodwa okanye ezininzi zophuhliso ezihlobene ne-rubella syndrome. Ezi mpazamo zinokukhubazeka okubonakalayo (ezinokubangela ukuphosakeka), ukulahlekelwa kwindlebe, ukukhubazeka kwentliziyo, ukulibala kwengqondo kunye nokukhubazeka kwengqondo. Iintsana ezininzi, ezazalelwa nge-rubella syndrome, zinokukhubazeka kwemoto, zenza imisebenzi elula ngokukhawuleza. Nangona kukho iimeko xa umntwana ezalwa enempilo .
Usulelo lwe-rubella luninzi lukhokelela kumathambo kunye nokuzalwa kokuzalwa komntwana. Kodwa le ngozi inkulu kakhulu ukuba intsholongwane yayisisigxina sokuqala sokukhulelwa. Kodwa umngcipheko wehla xa usuleleko luvele luvele kwiiveki zokuqala ze-trimester yesibini yokukhulelwa. Umngcipheko we-rubella syndrome kule meko i malunga ne-1%. Ezinye iintsana ezizalwe emva kokusuleleka ngu-rubella ngunina zinokuba neengxaki zezempilo zesikhashana. Bangakwazi ukuzalwa benesisindo esincinci, baneengxaki ngokutya, isifo sohudo, i-meningitis, i-anemia. Utshintsho lwexeshana kwigazi. Isibindi okanye ipenki inokwandiswa. Abanye abantwana banokubonakala bephilile ekuzalweni nasekuhambeni kwasebuntwaneni. Kodwa emva kwale ntsana udinga ukunyamekwa kwexesha elide eligunyazisiweyo, kuba izibonakaliso zezifo zingabonakala ebuntwaneni. Oku kuyinkathazo nokuva, ukubona, ukuziphatha kunokuvela kubuntwaneni. Kwakhona, abantwana abanjalo banomngcipheko wokwanda kwesifo sikashukela.
Indlela yokuchonga ukuba ngaba umfazi uyayicinga intsholongwane ye-rubella
Kukhona uvavanyo olulula lwegazi olungafumanisa ukuba umfazi unomkhuhlane we-rubella. Uphando lubonisa ukuba umfazi unokufumana izifo eziza kulwa nale ntsholongwane. Ama-antibodies akhiqizwa ngabantu abaye banesifo sengcinezelo okanye baye bagonywa ngokumelene ner rubella.
Unokuthintela njani ukukhusela i-rubella syndrome yomntwana
Ngenxa yoko, ibhinqa elifuna ukuba nomntwana ngaphambi kokukhulelwa kufuneka lihlolisise i-antibodies kwi-virus ye-rubella, kwaye ukuba unge-immunity ayitholakali, goma. Ukuba loo ntokazi ayigonyanga kwaye ukukhulelwa sele kuqalile, kuyimfuneko ukuba ugweme ngokunyanisekileyo abo banokukwazi ukunyamezela okanye ukunyamezela esi sifo. Ayikho enye indlela yokukhusela abafazi abakhulelweyo. Uloyiko lufanele lube ngowokuqala kokuqala kokukhulelwa, kuba ngeli xesha, ukubeka kunye nokwakhiwa kwamalungu ebalulekileyo ebomntwana.
Ukongezelela, ukukhusela isifo somfazi okhulelweyo, ugonywa lwe-rubella kufuneka lwenziwe ngumyeni, abantwana, izihlobo eziseduzeyo ezihlala kunye nalo mfazi, kwaye kuyaziwa ngokuqinisekileyo ukuba abanakho ukukhuseleka kwi-virus ye-rubella.
Namhlanje, ngokukhawuleza, kukho iingxoxo malunga neengozi okanye iinzuzo zezigulane. Le ngongoma asiyi kuqwalasela, njengokwenza okanye ukungenzi - wonke umntu uyazigqiba. Kodwa kulo mzekelo, umngcipheko kumntwana uphezulu kakhulu. I-Rubella iyisifo esiyingozi kakhulu kumfazi okhulelwe, ngoko ke kulo mzekelo, sifanele silinganise yonke inzuzo kunye nayo yonke ingozi esibhekiselele kuyo impilo yengane ezayo.
Ukukhulelwa lixesha elibaluleke kakhulu kwibhinqa, kwaye kuxhomekeke kuphela kwindlela yokuyenza ibekhuselekileyo kunokwenzeka kumntwana ozayo.
I-Callanetics: ubunzima bokuzilolonga kwabasetyhini abakhulelweyo
Indlela yokubala iintsuku ezikhuselekileyo ngesondo
Imfashini yasehlobo-ehlobo 2016 yabasetyhini abangaphezu kwe-50, ifoto
I-currant ebomvu ebusika: iindlela eziphambili zokupheka iimvayi, i-sauces, i-jellies. Ukulungiselela i-currants ebomvu ebusika kwi-multivark kunye nesitofu
Isivivinyo # 3: URozo Gigineishvili ubonise ukuba ngubani oye watshintsha uNadya Mikhalkov, ifoto
Ukukhulelwa nokubeletha - ulonwabo lomfazi
Isityalo seMedical goldrod
Indlela yokuphakamisa intshontsho ye-spaniel yaseRussia?
I-Adenium - i-rose rose entlango
Indlela yokulungisa ngokuchanekileyo kwi-brunette ukuya kwi-blonde
Uncedo kangakanani iqela le-aloe vera?